Mpanamboatra mikodiadia ambany profil - Mpamatsy gazy mirakitra endrika ambany ao Shina
Vary fanjonoana kodiarana fanjonoana tsara indrindra 200 reel vidiny ambany
1.Fomba fanjonoana: Fanjonoana trondro sy fanjonoana an-dranomasina
2.Reel Type: Baitcasting Reel - Miaraka amin'ny roitcasting reel, ianao koa dia hahazo hery bebe kokoa ho an'ny casting lavitra kokoa. Ity karazana rool ity dia hanome anao fanaraha-maso bebe kokoa sy fahitsiana amin'ny casting fa mitaky fahaizana kely kokoa noho ny spinners.
4. Gatio Ratio: 7.2: 1
5. Orientation-tanana: tànana ankavanana tanana ankavanana
Kodiaran-dranomasina manjono azo alaina ary kodiarana fampisehoana nomerika 6 + 1BB kodiarana jono lehibe
1.Fomba fanjonoana: jono manarato manjono an-dranomasina
2.Reel Type: Baitcasting Reel - Miaraka amin'ny roitcasting reel, ianao koa dia hahazo hery bebe kokoa ho an'ny casting lavitra kokoa. Ity karazana kodiarana ity dia hanome anao fanaraha-maso bebe kokoa sy fahitsiana amin'ny famoahana fa mila fahaizana kely kokoa noho ny spinners.
3. Fitaovana fitondra: 8.0: 1
4. Orientation-tanana: tànana ankavanana tanana ankavanana
Ranomasina kodia fanjonoana 6 + 1BB 7.2: 1 Kodiarana mitete metaly boatin'ny jono indroa maivana
1.Fomba fanjonoana: jono fanaratoana fanjonoana manjono an-dranomasina jono
2.Materaly: firaka aliminioma
3.Fitehirizana: Ultra Smooth - Betsaka sy kalitao avo lenta manome azy milamina kokoa., Mahery - Manolora hery mampiato tsy mampino. Izy io dia manana hazo goavam-be vita amin'ny metaly matevina, fitaovana familiana harato tonga lafatra. Aleo misafidy kofehy 2000 sy 3000 raha toa ka manjono amin'ny rano velona ianao. Raha manenjika trondro vaventy na karazana sira ianao, 4000 na ambony dia safidy tsara kokoa, Haingam-pandeha - Ny tahan'ny haingam-pandeha haingam-pandeha dia ahafahanao manary trondro be mora foana.
4.Reel Type: Baitcasting Reel - Miaraka amin'ny roitcasting reel, ianao koa dia hahazo hery bebe kokoa ho an'ny casting lavitra kokoa. Ity karazana rool ity dia hanome anao fifehezana sy fahamarinana bebe kokoa amin'ny casting fa mitaky fahaizana kely kokoa noho ny spinners.
5.Bola Bearings: 6 + 1BB
6. Taratry ny akanjo: 7.2: 1
7. Orientation-tanana: tànana havia havia
Fihodinan-jono japoney jono rodobe manjono vy
1.Fomba fanjonoana: fihodinan'ny jono
3. Fahaiza-mitantana (lbs / yds): 40/190
Riverlake AC Factory Prix mahery vaika vy sira ranomasina masinina manjono mivarotra amidy
3.Bola bearings: 1
4. Gatio Ratio: 5.2 / 1
LP2000 surf manarato manjelanjelatra manjelanjelatra bearings mihodina mihodinkodina
Ryobi fanjonoana japoney ryobi reel fanjonoana ryobi
1. Fomba fanjonoana: Jigging Fanjonoana jono Casting Trolling & Sambo jono jono ankapobeny jono jono Bass fanjonoana trondro Fanjonoana trondro.
2.Reel Type: Electric Reel Baitcasting Reel - Miaraka amin'ny roitcasting reel, ianao koa dia hahazo hery bebe kokoa ho an'ny lavitra lavitra casting. Ity karazana kodiarana ity dia hanome anao fanaraha-maso bebe kokoa sy fahitsiana amin'ny famoahana fa mila fahaizana kely kokoa noho ny spinners.
3.Bola Bearings: 9 + 1
4. Gatio Ratio: 7.3: 1
5.Toro-maso: tanana ankavanana